Baarista feyruuska koroonaha - Finentry
Baarista feyruuska koroonaha ee Finland
Baarista feyruuska koroonaha ujeeddadiisu waa in laga hortago baahista oo lagu hago haddii loo baahdo daryeel.
Waqti ballan waad ka qabsan kartaa Finland xagga howsha feyruuska koroonaha xagga FINENTRY-adeegga, Finland dhexdeeda howsha baarista koroonaha waa bilaash dadka waddanka imaanaya. Muddada baaritaanka waxaa la sii ballansan karaa illaa 7 maalmood ka hor.
Tusaale ahaan, deegaanka Helsinki ku xeeran waxaa ku yaalla qiyaastii illaa 50 goobood oo lagu baaro feyruuska koroonaha. Sidoo kale Helsinki-Vantaa ayraboorkeeda waxaa ku yaalla barta baarista feyruuska koroonaha oo loogu talogalay kuwa duullimaadyada ku imaanaya iyo kuwa kale oo imaanaya oo aay tahay in horay looga qaado baarista.
Feyruuska koroonaha sambalka baarista waxaa lagu qaadayaa qoray la galinayo sanka ama halka wax laga laqo.
Maxsuulka baarista feyruuska koroonaha waxaad ku heli qiyaastii 24 saacadood gudahood si farriin qoraal ah.
Karantiil rasmi ah
Karantiilka rasmiga ah waa kan dhaqtarka cudurrada faafa go’aan dowli ah lagu gaaro. Dhaqtarka cudurrada faafa wuu go’aamin karaa qof aan calaamadaha xanuunka ka muuqan in la galiyo karantiil, haddii qofkaas uu u dhawaaday ama la falgalay feyruuska koroonaha. Dhererka karantiilka waa badanaa 14 maalmood. Karantiilka rasmiga ah laguma gaabin karo baarista koroonaha. Warbixin dheeraad ah ka hel halkaan.
Gooni yeelidda waxaa loola jeedaa, in qofka cudurka faafa qaba laga gooni yeelo kuwa caafimaadka qaba. Halka kan waxaannu dooneeynaa, in la ilaaliyo faafidda sii socon laheyd ee suurtogalka ah. Shaqsiga waxaa lagu gooni yeeli cisbitaalka ama guriga.